Zero Ukuvukela umbuso: Ukugenca kweSiphepho
Vumela idemoni lakho elingaphakathi neZero Insurgency yethu: I-Sandstorm Hack
Ulawula ukuthi ungafinyelela isikhathi esingakanani ku-Insurgency: Sandstorm cheats - Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Kwesinye isikhathi ngeke waneliswe ngama-hacks ezinsuku elilodwa! Thenga ukhiye womkhiqizo weviki elingu-1 namuhla!
Yiba yilungu eliqinisekisiwe lomndeni weGamePron! Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 Namuhla!
Insurgency: I-Sandstorm ngumdlalo ovumela ukuthi kugxilwe ezingeni elithile, futhi uma untula lokho, ungahle ungabi nempumelelo enkulu. Ngokujabulisayo, ungasebenzisa i-Insurgency yethu: I-Sandstorm Zero Hack ukuthola isandla esiphakeme kuzo zonke izimpi zakho!
Umbhikisho: Imininingwane Yokugenca likaSandstorm Zero
Abadubuli bezempi abangokoqobo abazohlala beheha uquqaba lwabantu, kepha I-Insurgency: I-Sandstorm ngumdlalo ozohlola amakhono akho kakhulu kune-shooter ojwayelekile. Kuzofanele ukhathazeke ngokuthi iziphi izikhali ezizoba khona ngesikhathi sempi, kanye nezinga lamakhono ozakwabo. Uma ukhuphuka uyokulwa nabadlali abanekhono eliphezulu abebedlala isikhashana, usebenzisa i-Insurgency yethu: I-Sandstorm Zero Hack kungaba ukuphela kwempendulo esebenzayo. Ukuthuthukisa amakhono akho ngokwemvelo kuyinkqubo enzima, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngalo mdlalo; into enhle ungakhohlisa indlela yakho kukho konke!
Ngokubukwa, unikezwa ukufinyelela ku-Enemy ESP kanye ne-Info (okukuvumela ukuthi ubone izitha ukude). Ungasebenzisa futhi i-Aimbot enamasheke abonakalayo, okulungiselelwe ukuguquguquka / okubushelelezi, kanye nokukhethwa kwamathambo! Ukususwa kwe-Recoil ne-Sway kungenzeka ngaleli thuluzi.
Isitha ESP (Amabhokisi, Imigqa, Amathambo)
Mayelana ne-Insurgency: Hack Sandstorm Zero
Abadlali abanesipiliyoni kuphela abazokwazi ukubusa phezulu ngaphandle kokusebenzisa ama-hacks, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngomdlalo ofana ne-Insurgency: Sandstorm. Kwesinye isikhathi kuzofanele ungene neqembu labangane ukuze ujabule, kepha akusenjalo uma une-Insurgency: Sandstorm Zero Hack ohlangothini lwakho. Le cheat yangaphakathi ilula ukuyisebenzisa futhi izokuguqula ube ngumshini wokubulala wezinhlobo! Ingasetshenziswa ngisho nakwimodi yesikrini esigcwele, futhi yize iHWID Spoofer ingafakiwe, ungayithenga ngqo kusuka kithi kwaGamePron.
Kungani usebenzise Insurgency: Sandstorm Zero Hack ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Abanye abahlinzeki bama-hacks nabakhohlisi abasoze babeka ikhasimende phambili, futhi noma ngabe bathi bayakwenza lokho, abasoze bakuphathe njengoba senza lapha eGamePron. Ukubeka ukuphepha nokuzijabulisa kwabasebenzisi bethu ngaphambi kwanoma yini enye kusenze saba inketho ehamba phambili yama-hacks online, futhi asihleleli ngokushintsha izindlela zethu! Yize kungeyona iStreamproof, ungawudlala lo mdlalo ngokukopela okusebenze ngemodi yesikrini esigcwele; futhi inazo zonke izici ozidingayo ukuze uthole impumelelo yangempela ngenkathi udlala i-Insurgency: Sandstorm.
Kukangaki uzithola uzindla ngokuthi ungalwenza kanjani ushintsho ngenkathi ukopela? Amanye amathuluzi ajwayele ukukushiya uye ekufeni kwakho, kube sengathi awuzange ulungise izilungiselelo ngaphambi kokuvula umdlalo wakho, uqinisiwe. IGamePron yethula imenyu yangaphakathi nomdlalo ethembekile ekhona kuwo wonke amathuluzi ethu, futhi ne-Insurgency: Sandstorm Zero Hack ayihlukile! Ungahlela amasethingi akho okugenca okuningi ngendlela ongathanda ngayo lapha ku-GamePron, njengoba imenyu yethu engaphakathi komdlalo yenza ukwenziwa ngokwezifiso komuzwa wakho wokugenca kube umoya. Labo kini abaye bazama ukusebenzisa ama-hacks asezingeni eliphansi (angafaki imenyu engaphakathi kwegeyimu) esikhathini esedlule bazi kahle ukuthi sikhuluma ngani!
A2. Cha, awukwazi ukusakaza ngalokhu khohlisa.
Ilungele Yengamela nge-Insurgency yethu: I-Sandstorm Zero Hack?